Faraska Tinker | Fardaha Noti
Faraska loo yaqaan Toosh, Waa a faras adag oo docile ah taasi waxay kaloo leedahay gadaashooda taariikh kala duwan sida dhogorteeda.
Sifada ugu weyn ee ay leeyihiin, marka laga reebo quruxdooda, waxay ku jirtaa jirkooda xoogga leh iyo musqulaha wanaagsan ee loo qoondeeyay. Tan waxaa u dheer, nooca Tinker waa qurux gaar ah sababtoo ah dhogorta badan ee meelaha sida man, dabo iyo waliba addimmadiisa.
Kala duwanaanta midabka lakabyadoodu aad ayey u ballaaran yihiin, in kastoo si guud loo soo bandhigo hooska midabka csida bays, boodbooyin, iyo koofiyado madow, iyo kuwo kale oo badan.
ka Fardaha Tinker waxay asal ahaan ka soo jeedaan Ireland. Halkaas ayay joogaan maanta oo waxay in muddo ahba ku ahaayeen saxaabbo aan la dafiri karin oo ka mid ah bulshooyinka jimicsiga. Waxaa intaa dheer, magaceeda oo Ingiriis ah macnaheedu waa jimicsiga jirka. Jirka Tinker wuxuu soo jeedinayaa inay noqon karaan faracyada Shire, Clydesdale iyo Welsh Cob.
Sidaa darteed, iyada oo ay ugu wacan tahay astaamahooda docility iyo xoogga, waxaa loo isticmaalay taariikhda oo dhan sida fardo si loo jiido gawaarida ama sidoo kale fuulitaanka. Waxay sidoo kale isu muujiyeen inay yihiin mid ka mid ah fardaha ugu fiican fardaha inay u safraan masaafo dheer iyagoo xamuul culus wata.
Dhererka iskutallaabta fardaha Tinker wuxuu marayaa 140 sentimitir illaa qiyaastii 160. Noocani wuxuu leeyahay dabeecad aad u deggan oo weliba iyagu waa caqli caqli badan.
Haddii aan waxoogaa taariikh ah samayno ka dib markii ugu horraysay ee ay soo baxeen ilaa 600 oo dhalashadii Ciise ka hor, fardo Tinker waxay lahaayeen magacyo badan oo kala duwan intii ay taariikhdooda joogeen. Qaar ka mid ah magacyadan ayaa ah Gypsy Vanner, Gypsy Cob, Cob midab leh iyo Irish Cob.
Guud ahaan naanaysyadan ayaa ka hadlaya nooc faras aan caadi ahayn, oo ay soo jiitaan dadka safarka ah si ay ugu xoog weynaadaan inay guryahooda iyo alaabtooda ku qaadaan, laakiin isla markaa bini'aadamka oo ku filan Xullan ahaan waxaa loogula fardaha sida Clydesdales iyo Friesians, natiijadu waa xoogga faras qabyo ah oo leh dhererka faraska fuushan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Nooca faraska Tinker
Calaamadaha iyo astaamahooda